Dana Us: 86-13706206219
Syringe uye tsono
aizomupa uye ropa rinovira
Latex Nzira Gloves
Ercury-isina yekuongorora mudziyo
Mask (Particulate unomubatsira kufema)
Mumatumbu Endoscope Consumables
Central Venous anobudisa mushonga zvishoma nezvishoma
latex upfu vakasununguka magiravhusi Latex Nzira Gloves
mvura inobva lubricating mondo mafuta mondo
edta k2 chubhu ropa muunganidzwa Edta And gel Tube
Kuchengetedza Lancet PA
mhando zvomusejari sutures Polyglycolic acid Rapid Suture
Mamirire: Single-kushandiswa, asingakwanisi kuti kuzodzosera kushandiswa. Tsono ari kudzivirirwa vasati uye pashure kushandiswa zvachose. Mbereko: Sterilized ne wegamma-Ray pakanaka: Nyore kushandisa pre-akatakura uye kumanikidzwa kusashanda mudziyo. High yepamusoro tri0bebel tsono dzakakwirira-nokukurumidza kupinda. Multiple kusarudza kupa zvakasiyana siyana ...
kuti kuzodzosera kushandiswa Single-kushandiswa, asingagoni.
Tsono ari kudzivirirwa vasati uye pashure kushandiswa zvachose.
Mbereko: Sterilized ne wegamma-Ray
Nyore kushandisa pre-monica uye kumanikidzwa kusashanda mudziyo.
High yepamusoro tri0bebel tsono dzakakwirira-nokukurumidza kupinda.
Multiple kusarudza kupa siyana gauze hukuru uye kupinda
pakadzika kusangana vakawanda rirambe richibvira ropa requirements.Healthecare vashandi
nguva dzose vanotarisana zvinogona tsono-rutanda kukuvara ose zuva apo pakutarisira
nokuti paitents, kusanganisira kugara ropa-kuzvarwa utachiona suc sezvo AIDS
uye ropa vakaberekerwa utachiona, zvakadai seAIDS uye Hepatities wanda.
chengetedzo yedu Lancet akanga desighed kudzivirira kumusoro-dzataurwa mamiriro ezvinhu.
Usashandisa Lancet kana unodzivirira chivharo akaita beend kubviswa kare.
Color: Orange, Rose tsvuku, Green, Yellow
Apex 100pcs / bhokisi, 2000pcs / ctn
Sinomed ndeimwe aitungamirira China Blood Lancet vagadziri, fekitari edu anogona kubereka CE advertising hazvikuvadzi Lancet PA. Welcome to Wholesale zvakachipa uye yepamusoro zvigadzirwa kubva kwatiri.
Hot Tags: yakachengeteka Lancet PA, China, vagadziri, fekitari, Wholesale, cheap, yepamusoro, CE advertising
Previous: namapfumo uye bvunzo rinoparadza Safety Lancet BA
Next: Stainless Steel Lancet
Blood Shuga Lancet
Blood monyorora-Off Lancet
Disposable Lancet Tsono
Lancet With Plastic Cover
Medical Disposable Blood Lancet
chena Blood Lancet
monyorora Blood Lancet
shavishavi tsono ropa SWEDERA Butterfly tsono
Tourniquet, TPE zvinhu
kuroora kushandiswa kuraswa namapfumo Blood Lancet With ...
namapfumo uye bvunzo rinoparadza Safety Lancet BA
ba ropa muunganidzwa tsono Blood Collection tsono